News 1 | Thuta Shwe Kyal
September 18, 2019 thutashwekyal 0
🍀အရသာမှာ. အနည်းငယ်. ပူ စပ် ချို. စိမ့် သည်။ ငွေပန်းဥ သည် အရိုးနဲ့ ချဉ်ဆီ ကို အားဖြစ်စေသည်။ ခါး. ဒူး. အရွတ်တွေကို အားဖြစ်စေသည်။ 🍀ကျည်းပေါင်းကို သက်သာစေသည် အကျိတ်ကို ပျောက်စေသည်။ သွေးအားကို ဖြစ်စေသည်။ နို့ကို ထွက်စေသည်။ […]
ကြွက်နို့နဲ့ ငါးမျက်စိအတွက် အိမ်တွင်းဖြစ်ဆေးနည်းကောင်း share ထားပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်သလို မိမိ wall တွင် share ထားပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
မျက်စိ ရောဂါ ကို အင်္ဂလိပ်လို Cron ခေါ်ပါသည်။ ငါးမျက်စိ ရောဂါ (molluscum Contagiosum) သည် အရေပြား ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဖုလေးအလုံးလေး များဖြစ် ပါသည်။ ညှစ်လိုက်ပါက အဖုလုံးလေး များမှ အဆံလေးများထွက်တတ်ပါသည်။ ကူးစက် မှုလွယ်ကူးပြီး။ ထိမိ၊ဖိမိက နာလှပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် […]
ရက်စက်လိုက်တဲ့ယောင်္ကျား ) ဇနီးသည် ရင်သားကင်ဆာခံစားနေရတာကို သိပြီးနောက် #ကွာရှင်းသွားတဲ့ အမျိုးသား လင်နဲ့မယားရယ်လို့ အိမ်ယာတစ်ခုကို တည်ထောင်ကြတဲ့အခါ တစ်ချို့တွေကတော့ မေတ္တာပေးလို့ မေတ္တာရကြပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ ဆိုးဝါးလှတဲ့ လောကဓံရိုက်ချက်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ လက်ရှိအိမ်ထောင်ကို ပယ်ပစ်၊ အသစ်ဆီမှာ စားကျက်ရှာတတ်ကြပါတယ်။ အခုလည်း ထိုင်းအမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ်က အတော် ရင်နာစရာ […]
မန်းမြို့တော် ပေါက်စီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ သား မောင်ဘုန်းရှင်ကဖားအောက်တောရ အဓွန့်ရှည်ပြီး သာသနာဆက်လက် ပြန့်ပွားစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅၀၀ လှူဒါန်းလိုက်
မန္တလေးမြို့မှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးက ၎င်းရရှိမည့်အမွေများထဲမှ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ ကို ပြင်ဦးလွင်ရှိဖားအောက်တောရသို့ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ကျောက်ဖျာ ဒိုးကျေးရွာရှိ ဖားအောက်တောရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုရန် ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်နှင့်မြေအပါအဝင် အကျိုးခံစားခွင့် အားလုံးကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၉ဝဝဝ၊ မန္တလေးပြည်ကြီးတံခွန် […]
သားလိမ်မာလေး…ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ… အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မိဘ(၂) ပါးကို ပိုက်ဆံပုံကြီး (၂) ပုံနဲ့ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်(အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ် ပိုင်တံခွန် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ပိုင်တံခွန်က မော်ဒယ်လ် အလုပ်အပြင် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရှိတာကြောင့် သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့မွေးနေ့ မှာ မိဘတွေကို များပြားလှတဲ့ ပိုက်ဆံများနဲ့ […]
လက်ရှိမှာတော့ သမီးလေးတွေရဲ့ အလှကြောင့် အမျိုးသားပရိသတ်တွေက ယောက္ခမအခေါ်ခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချောမောလှတဲ့ သမီးလေးတွေကြောင့် မျက်နှာပန်းလှတဲ့ အဖေတွေလို့တောင် ဆိုရမှာပါနော်။ယောက္ခမလို့ ခေါ်ခံနေရတဲ့ အမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေ များစွာရှိနေကြတဲ့ အထဲကမှ (၃)ယောက်ကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။သူတို့ကတော့ (၁)မင်းမော်ကွန်း … မင်းမော်ကွန်းကတော့ အကယ်ဒမီမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဘက်ဘက်က အနုပညာပါရမီပြည့်ဝတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ များများ​ဝေ​ပေးကြပါ “ကျောက်ကပ်ရောဂါရှင်များအတွက် ထိကရုံးပင်” ==========
ထိကရုံးကို ပြာဖစ်အောင်မီးရှို့ပါ… ပြီးရင်းရေနဲ့စိမ်ပီ အနည်ထိုင်ပီဆိုရင် ရေသောက်သလိုသောက်ပေးပါ ကျောက်ကပ်တွေ (၇) ရက်အတွင်း ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ် ကျောက်ကြေကျလာမယ် ။ ဟင်းနုနွယ် ——– ဟင်းနုနွယ် ဆူးပါတဲ့ အရိုင်းဖြစ်ရမယ်နော် ဟင်းနုနွယ်ကို အရွက်အရိုးအမျှစ် အကုန်ယူပါ ဟင်းနုနွယ်ကို ပြုတ်ပီးသောက်ချင်းအားဖြင့် ရောင်ယမ်းတာတွေ ပျောက်ပါတယ် အညောင်းညာလဲ ပျောက်တယ် […]
ပျဉ်း​တော်​သိမ်​ရွက်​က ကင်ဆာရောဂါ နှင့် နှလုံးရောဂါ ကို တားဆီးနိုင်သည့်အပြင် မှတ်ဥာဏ်ကိုပါ ကောင်းမွန်စေတယ်​ဆိုတာ သင်​တို့ သိပါသလား…?
ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်၌ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ B1၊ B2၊ ထုံးဓာတ်၊ သံဓာတ်၊ ကစီဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ အသားဓာတ် များ ပါဝင်ဧ။် ။ ထို့ပြင် (အမိုင်နိုအက်ဆစ်)များစွာ ပါဝင်ပြီး ထိုအက်စစ်များကြောင့် အစားအသောက်များအား မွှေးကြိုင်သောရနံ့ ဖြစ်စေပြီး ရောဂါအမျိုးမျိုး ကာကွယ်ပေးပါသည် ။ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်တွင် […]
အားလုံး သတိထားကြပါ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပီ မန်းလေးမှာ နေရတာ မလုံခြုံတော့ဘူး အားလုံးကို သတိထားစေချင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ
မနေ့က နေ့လည် ၁၂နာရီခန့်က အ်ိမ်ကို အလှူခံယောင်ဆောင်ပီး လူ ၅ ယောက်အရင်လာကြတယ် အပြင်သွားခါနီးခြံတံခါးဖွင့်ထားတာနဲ့ ကြုံတော့ အတင်းဝင်လာပီး ရေဘေးသင့်အတွက်ဆိုပီး လှူခိုင်းတယ် ( အမရပူရ ဥက္ကဌကြီးရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ စာရွက်တွေ ပါယူလာပြတယ် ) မလှူတော့ဘူး ပြောလဲမရဘူး လှူရမယ်ဆိုပီး ယောက်ျား၅ယောက်က ကျမကို […]
သားကိုကျောင်းကောင်းထားချင်လို့ အိမ်လိပ်စာလိမ်ပြီးထည့်ခဲ့တဲ့မိခင် ထောင်ငါးနှစ်ကျ =======================
ပညာရေးကို လုံးဝအမှားမခံတဲ့ အမေရိကန်လို နေရာမျိုးမှာ ပညာသင်ခွင့်ရဖို့ အချက်အလက်အမှားတွေနဲ့ ကြိုးပမ်းတာမျိုးကို လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူး။ Apannpyay ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ပညာရေး စနစ်နဲ့ မြန်မာပညာရေးစနစ်ရဲ့ ကွာခြားမှုကို အရင်ဆုံးနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ နာမည်ကြီး The Telegraph သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းကို APANNPYAY က ပြန်တင်ဆက်ပေးပါမှာပါ။ […]
အသက် ၂၄ နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း သင်လုံးဝမလုပ်သင့်တော့တဲ့ အရာများ
၁။ အပေါစားအ၀တ်အစားတွေဝယ်တာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ လူငယ်ဘာသာသဘာဝ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အမီ သင်ဟာ ပေါ်ပင်ဖက်ရှင်တွေနောက်ကို လိုက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ပေါ်ပင်တွေနောက်ကိုမလိုက်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အများလေးစားခံရပြီး စတိုင်ကျတဲ့သူဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ဝတ်ဆင်မယ့် အ၀တ်အစားတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိုစတင်လိုက်ပါတော့။ တစ်လနှစ်ခါလောက် အ၀တ်အစားအသစ်တွေဝယ်ဝတ်နေမယ့်အစား အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုစုပြီး နှစ်လတစ်ခါလောက်မှဝယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး […]
သတိအန္တရယ်ရှိသည်မိဘတွေအနေနဲ့လဲသတိထားသင့်ပါတယ် ကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေ အလွယ်တစ်ကူရနိုင်ပြီး
ဒီနေ့သားကြီးကျောငိးကြိုရင်းအပြန်မှာ ဖေဖေ coca cola တစ်ဘူး ပူရှိန်းတစ်တောင့်ဝယ်ပေးပါတဲ့ မင်းဘာလုပ်ဘို့လဲဆိုတော့ သားမသောက်ပါဘူးတဲ့ ဒီနေ့ကျောင်းမှာ သိပ္ပံချိန်လက်တွေ့သင်တန်းမှာ ဆရာက coca cola ခွက်ထဲ ပူရှိန်းကိုထဲ့ပြတယ် ဖောက်ဆိုပေါက်ထွက်သွားတယ်တဲ့ အဲ့ဒါအိမ်မှာစမ်းလုက်ပြမလို့တဲ့ ကျွန်တော်လဲ သားမလုပ်ရဘူး သေတတ်တယ် ရောစားလို့လဲမရဘူးလို့ဟြေခဲ့တယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကလဲ သတင်းတစ်ပုတ်ဖတ်ဖူးတယ် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံကကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် ကိုလာနဲ့ပူရှိန်းတွဲစားမိတာ […]
တစ်နေ့ကျလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလင်မယားဘဝကနေ မိဘတွေဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှ”သဲလေး ပြန်အိပ် ပြန်အိပ်၊ သားကို ကိုယ်ဒိုင်ပါလဲ၊ နို့တိုက်ပြီး ပြန်သိပ်လိုက်မယ်”အဲလိုလူရှိပြီးပြီဆိုရင်လဲ ပိုချစ်လိုက်
တစ်နေ့ကျလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလင်မယားဘဝကနေ မိဘတွေဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဘဝကနေ မိခင်ဘဝကို ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်တစ်ကယ်လိုချင်တာ ပိုက်ဆံတွေရှိတဲ့ ယောက်ျား၊ ရုပ်ချောတဲ့ယောက်ျား မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပိုသေချာသွားလိမ့်မယ်။ ချောတဲ့သူ၊ ငွေရှိတဲ့သူလဲကောင်းပါတယ် (ငွေရှာပြီး ရော့အင့်ဆိုပြီး ကလေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မေမေချည်း လုပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆ၊ ကိုယ်က ကလေးနဲ့ selfie […]
မန္တလေး ကျောက်စိမ်းစေတီမှ ကျောက်အချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားအချို့ယူငင် ယူနေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက ပြောကြားသည်။
မန္တလေး ၊ စက်တင်ဘာ , ၁၇ … မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီးမှ ကျောက်စိမ်းဖြတ်စအချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားများက ယူငင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး ဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး အရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ ကိုးလုံးပုတီးနေရာတွင် သံဆန်ခါကာရံထားရှိသည့် အဆင့်နိမ့် ကျောက်စိမ်းအချို့ကို ယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယူနေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက […]
အနာနှင့်ဆေးတွေ့ပြီး အမြန်ပျောက်ကင်းပါစေလိုသော စေတနာဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါတယ် ရှယ်ပြီးသိမ်းထားစေလို ‘ခါးနာ ဒူးနာ အကြောတင် အကြောကိုက် အစစ်အမြစ်ကိုက်အတွက်”
September 17, 2019 thutashwekyal 0
ခါးနာ ဒူးနာ အကြောတင် အကြောကိုက် အစစ်အမြစ်ကိုက်အတွက်” သက်ရင်းကြီးမြစ်ဆိတ်ရိုးလိမ်းပေးရင်အရိုးအစစ်အမြစ်ကိုက်အတွက် ( ဒေါက်တာအောင်နိုင် – ဆေးသုတေသန ) ဆေးနည်းမှအစွမ်းထွက်ပြီးသိသူများကြပါတယ် ။ ယခုဆေးနည်းမှာလူသိနည်းသဖြင့်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် လက်တွေ့ဖြစ်သူများအမှန်ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ဆေးနည်းပါ ။ တလောကရွာမှ သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့မိခင်မှာ အိပ်ယာထဲတကျွတ်ကျွတ်ညဉ်းနေသဖြင့် ဘာဖြစ်တာလည်းမေးမိလိုက်ရာ ဆန်အိပ်ပိုင်းကိုမလိုက်မိပြီး ခါးမှာဂျွတ်ခနဲဖြစ်သွားသည် ညရောက်တော့ခါးကကိုက်လာပြီးနောက်နေ့ထိုင်ရာကမထနိုင်တော့ပဲ ယခုလိုဖြစ်နေတာပါဟု သူငယ်ချင်းမှပြောပြလေသည် […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ကို
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘီလ်ဂိတ်ကို “ကမ္ဘာပေါ်မှာ သင့်ထက် ပိုပြီးချမ်းသာတဲ့သူ ရှိသလား” လို့ လူတစ်ဦးက မေးတယ်။ “ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီး ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ရှိပါတယ်။” လို့ ဘီလ်ဂိတ်က ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဘီလ်ဂိတ်က သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် […]